ချက်မယ်စားမယ် | ဒီပကျော်(နည်းပညာ) | Page 2
အင်းလေးဘီးမုန့်ကို ကျွန်မတို့ အင်းလေးသွားလည်စဉ်က တွေ့ခဲ့၊ မြည်းခဲ့ရပါတယ်။ အာလူးကတ်တလစ်နဲ့ အရသာအနည်းငယ်မျှဆင်ပါတယ်။ သို့သော် သူက ပိုစားလို့ကောင်းပါတယ်။ အာလူးနဲ့ လုပ်ရင် အာလူးဘီးမုန့်၊ ငါးနဲ့လုပ်ရင် ငါးဘီးမုန့်ပေါ့နော်။ ကျွန်မကတော့ (၂) မျိုးလုံး ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီနည်းကို လိုချင်တာနဲ့ သားကြီးတို့ ဆရာမကြီး အင်းလေးသူ အန်တီကို သေချာမေးထားရတဲ့ နည်းလေးပါ။
► မုန့်လုံးစပ်နည်း (Dough စပ်နည်း)
♦ ရှမ်းဆန် (သို့) ရိုးရိုးဆန်မှုန့် – ၄ ဘူး (Rice Cooker) ဆန်ချိန်ခွက်
♦ ကောက်ညှင်းဆန်မှုန့် – ၁ ဇွန်း
၁။ အထက်ပါများကို ရေအနည်းငယ် (အကြမ်းပန်းကန်) တစ်ဝက်စာထည့်နယ်ပြီး ပေါက်စီအလုံးလေးများကဲ့သို့ လုံးပြီး ရေနွေးပွက်ပွက်ဆူ ထည့်ပြုတ်ပါ။ ပေါ်လာရင် ဆယ်ယူလာသော မုန့်အလုံးလေးများကို ကြက်ဥတစ်လုံးဖောက်ပြီး ရောကာ သမအောင် မုန့်သားညက်အောင် နယ်ပေးရပါမည်။
၂။ နယ်ပြီး မုန့်များကို အလုံးသေးသေးတစ်ခုချင်းလုံးကာ ပြားနေအောင် တစ်ဖန် တလှိမ့်တုံးဖြင့် လှိမ့်ပေးရပါတယ်။
၃။ အပြားပေါ်မှာ အဆာထည့်ပြီး ခေါက်လိုက်ကာ အနားများကို လက်ဖြင့်ဖိ၍ သော်လည်းကောင်း၊ ပုံသဏ္ဌာန်ချပြီးသား ခွက်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း ဖိချပေးရပါမယ်။
၄။ ပြီးမှ မုန့်များကို ဆီမြုပ်အောင် ကြော်ပေးရပါမည်။
၅။ အချဉ်အနေနဲ့ သံပရာ၊ ငရုတ်သီးရောစပ်ထားသော အချဉ် (သို့) ငရုတ်ဆီ စတာတွေနဲ့ တို့စားရင် အလွန်အရသာရှိသော အဆာပြေမုန့်တစ်ခု ရရှိပါမည်။
► အထဲမှာ ထည့်ရန် အဆာများ
အာလူးဘီးမုန့်အတွက် အာလူးကို နူးနေအောင် ပြုတ်ပြီး ချေကာ ဆားအနည်းငယ် ရောထားပါ။ အာလူး အရောကို အဆာသွတ်နိုင်ပါတယ်။ ကြက်သွန်မြိတ် ကြိုက်ရင် ညှပ်ထည့်ပါ။
၁။ ငါးရဲ့အသားကို ပြုတ်ထားပါ။ ဆီနဲ့ အနည်းငယ် ကြော်ထားပါ။
၂။ ကြက်သွန်မြိတ်၊ ကြက်သွန်နီ အနည်းငယ် ပါးပါးစီလှီးထားပြီး ဆား၊ အသားမှုန့်တို့ထည့်ကာ ဆီပါလေကာဖြင့် ရောလုံးထားပါ။ ပြီးမှ ငါးပြုတ်ကြော်ဖြင့် ရောပြီး အဆာသွတ်နိုင်ပါပြီ။
ဒါလေးကလည်း အညာမုန့်လေးပါ။ မုန့်လုံးကြီးဆိုပေမဲ့ ရန်ကုန်မှာ ရောင်းနေတဲ့ မုန့်လုံးကြီးတွေလို မတူဘဲ ပဲနဲ့ ဆုပ်ထားပြီး အထဲမှာ ထန်းလျက်ဌာပနာထားတာမျိုးပါ။ အညာဒေသမှာ မုန့်တွေကို ပဲလွန်းနဲ့ အဓိကထားပြီး စားသုံးပါတယ်။ မုန့်ပျားသလပ်မှာလည်း ပဲလွန်းထည့်တာ များပါတယ်။ ခုလဲ ပဲလွန်းကိုပဲ သုံးထားတာပါ။ ပဲလွန်းကို ရေကြိုမစိမ်ဘဲ ပြုတ်ပါတယ်။ အနူးပိုလွယ်လို့ပါ။
♦ ကောက်ညှင်းမှုန့် – 150 g
♦ ဆန်မှုန့် – ထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်း
♦ ပဲလွန်း – ထမင်းစားဇွန်း ၂ ဇွန်း
♦ ရေနွေးနွေး – အကြမ်းပန်းကန်
♦ ထန်းလျက် – ၆ လုံး
♦ မြေပဲလှော်ပြီးသား – လက်တစ်ဆုပ်
၁။ ပဲလွန်းကို နူးအိနေအောင် ပြုတ်ထားပေးရမယ်။
၂။ ကောက်ညှင်းမှုန့်နဲ့ ဆန်မှုန့်ကို ရေနွေးနွေးနဲ့ ရောပြီးနယ်ပေးထားပါ။ အခဲလေးတွေ အနေထားပဲရှိနေပါမယ်။
၃။ ထန်းလျက်နဲ့ မြေပဲလှော်ကို ရောထောင်းထားပါ။ ညက်နေပါစေ။
၄။ ခုနက မုန့်နှစ်အခဲလေးများကို ပဲပြုတ်ထားတာနဲ့ ရောပြီး သမအောင် နယ်ပေးပါ။ ဆားနည်းနည်းထည့်ပါ။
၅။ နယ်ပြီးသား မုန့်အနှစ်များကို လက်ဖဝါးပေါ် တစ်ဝိုင်းစာတင် ထန်းလျက်အရောကို ဌာပနာလက်နဲ့ ဆုပ်ပြီး အလုံလေးလုပ်ပေးပါ။ အထဲက ဌာပနာမထွက်အောင် ဆုပ်ပေးမှ စားကောင်းပါတယ်။
၆။ အလုံးလေးများကို ရေနွေးပေါင်းချောင်ဖြင့် မိနစ် ၂ဝ ခန့် ပေါင်းပေးပါ။ မုန့်သားကို ထိုးကြည့်လို့ အိနေရင် စားဖို့ အဆင်သင့်ပါပြီ။
၇။ မုန့်လုံလေးများ ပေါင်းပြီးရင် ပဲဆီလေးနဲ့ လိုက်သုတ်ပြီး မွှေးမွှေးနွေးနွေးလေး စားရင် အလွန်အရသာရှိပါတယ်။
ငါးရံ့တာရီယာကီ၊ ပန်းသီးစိမ်းထောပတ်သီးသုပ်၊ ထမင်းဖြူဆန်ပြုတ်နှင့် ရှမ်းချဉ်
ဒီလမှာ ပရိသတ်များအတွက် ရွေးချယ်ပေးလိုက်တဲ့ ဟင်းလျာအတွဲကတော့ ‘ငါးရံ့တာရီယာကီ၊ ပန်းသီးစိမ်းနှင့် ထောပတ်သီးသုပ်၊ ထမင်းဖြူဆန်ပြုတ်နှင့် ရှမ်းချဉ်’ တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ငါးရံ့ကို ဂျပန်တာရီယာကီအနှစ်နဲ့ အိုးကပ်ကင်ထားတာဆိုတော့ ဆန်ပြုတ်နဲ့လိုက်ဖက်ပါတယ်။ ပန်းသီးစိမ်းနဲ့ ထောပတ်သီးသုပ်ကတော့ ဥရောပ အစားအစာ ပြင်ဆင်ပုံလေးနဲ့ ပြင်ဆင်ထားတာပါ။ ဆန်ပြုတ်ကလည်း ထမင်းဖြူကို ငါးပြုတ်ရည်နဲ့ကြိတ်ပြီး ပြင်ဆင်ထားတဲ့ ထမင်းဖြူဆန်ပြုတ်လေးပေါ့။ ဆန်ပြုတ်ကို အမြန်ပြင်ဆင်တဲ့ အလွယ်နည်းလေးဆိုပါတော့ တစ်ခါတစ်ရံ ထမင်းစားလိုစိတ်မရှိတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ အခုလို လွယ်ကူမြန်ဆန်တဲ့ နည်းလေးတွေနဲ့ထမင်းဖြူ ဆန်ပြုတ်လေး ပြင်ဆင်ပြီး ငါးရံ့တာရီယာကီလေးနဲ့ဆို ခံတွင်းတွေ့စေမှာပါ။ ပန်းသီးစိမ်းနဲ့ ထောပတ်သီးသုပ်ကတော့ ဗီတာမင်နဲ့ သတ္ထုဓာတ်တွေ ရရှိနိုင်တာမို့ အာဟာရလည်းဖြစ် အစာကြေလည်း လွယ်စေမှာပါ။ ငါးရံ့ကလည်း ပရိုတင်း ပါဝင်မှုများတာမို့ ထမင်းဖြူဆန်ပြုတ်နဲ့ဆို အလွန်လိုက်ဖက်ပါတယ်။ ကဲ . . . Fusion ဟင်းလျာအတွဲလေးနဲ့ စိတ်ကျေနပ်မှု ရနိုင်ကြပါစေဗျာ။
► ငါးရံ့တာရီယာကီတွင် ပါဝင်ပစ္စည်းများ
♦ ငါးရံ့ – ၁ဝ ကျပ်သား
♦ သံပရာသီး – ၁ လုံး
♦ ငရုတ်ကောင်း – အနည်းငယ်
♦ တာရီယာကီအနှစ် – ၂ ဇွန်း
♦ BBQ sauce – ၂ ဇွန်း
♦ သံလွင်ဆီ – အနည်းငယ်
♦ White Wine – ၂ ဇွန်း
► ငါးရံ့တာရီယာကီ ချက်ပြုတ်ပုံအညွှန်း
၁။ ငါးရံ့ကို သံပရာသီး၊ ဆား၊ ငရုတ်ကောင်း၊ တာရီယာကီအနှစ်၊ BBQ Sauce တို့ဖြင့် အရသာသွင်းပါ။
၂။ ဒယ်အိုးထဲတွင် သံလွင်ဆီအနည်းငယ်ထည့်၍ ငါးရဲ့အသားလွှာကို ကင်ပါ။
၃။ တာရီယာကီအနှစ်၊ BBQ Sauce ၊ White Wine တို့ကို ထည့်၍ တည်ခင်းနိုင်ပါသည်။
► ပန်းသီးစိမ်းထောပတ်သီးသုပ်တွင် ပါဝင်ပစ္စည်းများ
♦ ပန်းသီးစိမ်း – ၁ လုံး
♦ ထောပတ်သီး – ၁ လုံး
♦ ဒိန်ချဉ် – ၁ ဇွန်း
♦ မရောနိစ် – ၁ ဇွန်း
► ပန်းသီးစိမ်းထောပတ်သီးသုပ် ချက်ပြုတ်ပုံအညွှန်း
၁။ ပန်းသီးစိမ်း၊ ထောပတ်သီးတို့ကိုလှီး၍ ရေခဲရေဖြင့် အအေးခံထားပါ။
၂။ ကြက်သွန်နီ၊ ဒိန်ချဉ်၊ မရောနိစ့်၊ သံပရာရည်၊ ဆား၊ ငရုတ်ကောင်းတို့ဖြင့် ရော၍ သုပ်၍ စားသုံးနိုင်ပါသည်။
ကြက်သားနှင့် ကြက်အသည်း ကုန်းဘောင်ကြီးကြော်
ဒီလမှာ ပရိသတ်ကြီးအတွက် ရွေးချယ်ပေးလိုက်တဲ့ ဟင်းလျာလေးကတော့ တရုတ်အစားအစာ ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်နည်းကို အခြေခံပြီး တစ်ပွဲတည်းနဲ့ အာဟာရ အားလုံးပြည့်စုံတဲ့ ‘ကြက်သားနှင့် ကြက်အသည်းကုန်းဘောင်ကြီးကြော်’ ဟင်းလျာလေးပါပဲ။ ပြင်ဆင်ရတာလွယ်ကူပြီး အရသာလည်းထူးခြားတဲ့ ဟင်းလျာလေးမို့ လူကြီးလူငယ်မရွေး သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ကြက်ရင်အုပ်သားက ပရိုတင်းပြည့်ဝသလို ကြက်အသည်းကလည်း ထူးခြားတဲ့ အာဟာရဖြည့်အစားအစာဖြစ်တာကြောင့် သီးနှံစုံနဲ့ တွဲဖက်လိုက်တော့ ဗီတာမင်နဲ့ သတ္ထုဓာတ်တွေပါ ပြည့်ဝသွားတာပေ့ါ။ ကုန်းဘောင်ကြီးကြော်ကို မြန်မာတွေကြိုက်တဲ့ အစပ်အရသာလေး ဖြည့်စွက်ပြီး တစ်မူထူးခြားစွာနဲ့ ပြင်ဆင်ထားတာမ်ို့ အကြိုက် တွေ့စေမှာပါ။ အစာကြေလွယ်ကူစေတဲ့ ဟင်းလျာလေးမို့ စားပြီးရင်လည်း အာဟာရပြည့်ဝစွာ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ကဲ . . . ရိုးရှင်းပြီး အရသာထူးခြားတဲ့ ‘ကြက်သားနှင့် ကြက်အသည်း ကုန်းဘောင်ကြီးကြော် ‘ လေး ချက်ကြည့်ကြရအောင်ဗျာ။
♦ ကြက်ရင်အုပ်သား – ၁၆ဝ ဂရမ်
♦ ကြက်အသည်း – ၁ဝဝ ဂရမ်
♦ မုန်လာဥနီ – ၁ လုံး
♦ ရွှေပဲသီး – အနည်းငယ်
♦ ဗိုလ်စားပဲ – အနည်းငယ်
♦ ပန်းပွင့်စိမ်း – အနည်းငယ်
♦ ပန်းဂေါ်ဖီ – အနည်းငယ်
♦ ဆလတ်ရိုး – အနည်းငယ်
♦ တရုတ်နံနံ – အနည်းငယ်
♦ ငရုတ်သီးစိမ်း – ၅ တောင့်
♦ ငရုတ်ပွခြောက် – ၃ တောင့်
♦ ပဲငံပြာရည် (အငန်) – အနည်းငယ်
♦ ပဲငံပြာရည် (အချို) – အနည်းငယ်
♦ ခရုဆီ – အနည်းငယ်
♦ နှမ်းဆီမွှေး – အနည်းငယ်
♦ ပဲဆီ – ၃ ဇွန်း
♦ ကြက်သားမှုန့် – အနည်းငယ်
၁။ ကြက်ရင်အုပ်သားနှင့် ကြက်အသည်းကို ဆား၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်၊ ကြက်သားမှုန့်၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ခရုဆီ၊ ပဲငံပြာရည် (အငန်)၊ ပဲငံပြာရည် (အချို)၊ ငရုတ်သီးစိမ်း၊ ရှလကာရည်၊ နှမ်းဆီမွှေး၊ သံပရာရည်တို့ဖြင့် အရသာသွင်းပါ။
၂။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို လှီးပါ။ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန် နီတို့ကိုလှီးပါ။
၃။ ပဲဆီအနည်းငယ်ထည့်၍ ငရုတ်ပွခြောက်ကို ကြွပ်အောင်ကြော်ပါ။
၄။ ကြက်ရင်အုပ်သားနှင့် ကြက်အသည်းကို ချင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီ ဖြင့် ဆီသတ်ပါ။
၅။ သန့်စင်ထားသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို ပဲဆီဖြင့်ကြော်ပါ။
၆။ ဆီသတ်ထားသော ကြက်သား၊ ကြက်အသည်းတို့ဖြင့် ရော ကြော်ပါ။
၇။ အရသာအတွက် ခရုဆီ၊ ပဲငံပြာရည် (အငန်)၊ ပဲငံပြာရည် (အချို)၊ ဆား၊ ငရုတ်ကောင်း၊ အသားမှုန့်တို့ထည့်ပါ။
၈။ တရုတ်နံနံ၊ နှမ်းဆီမွှေးအနည်းငယ်ထည့်၍ စားသုံးနိုင်ပါသည်။
ကြံမဆိုင်ဟင်းချိုကတော့ လူတိုင်းကြိုက်တဲ့ တရုတ်ဟင်းချိုတစ်မျိုးပါ။ ခုကျွန်တော်ပြောပြမဲ့ ဟင်းချိုလေးကလည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာချက်နေကြတဲ့ ကြံမဆိုင်ဟင်းချိုလေးနဲ့ တော်တော်လေးဆင်တူသလို ကွဲပြားနေတာလေးတွေလည်းရှိပါတယ်။ ချင်းနံ့လေးသင်းပြီး ချဉ်ချဉ်လေးနဲ့ သောက်ရတာအင်မတန်မှ အရသာရှိပါတယ်။ ကြံမဆိုင် (Salted Mustard Green) ကို ပါးပါးမလှီးဘဲ။ အတုံးကြီးကြီးတုံးထားပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကြံမဆိုင်နဲ့ ပဲပြားတုံးလေးတွေကို မြိတ်ချဉ် (ပဲငံပြာရည်+ကြက်သွန်ဖြူ+ငရုတ်သီးစိမ်း)တို့ပြီး စားရတဲ့အရသာကလည်း ထူးလှပါတယ်။ ဟင်းရည်လေးသောက်လိုက် ပဲပြားလေးကိုတို့စားလိုက်နဲ့ ထမင်းမြိန်စေတဲ့ တရုတ်ဟင်းချိုလေးပါ။ ချက်နည်းလေးကို ကြည့်ကြရအောင် . . . ။
♦ ကြံမဆိုင် – 350 gm (အတုံးကြီးကြီးတုံးထားပါ)
♦ ဝက်သား – 200 gm (ပါးပါးလှီးထားပါ)
♦ ပဲပြား – ၃ ပြား (ပဲပြားတပြားကို ၆တုံး တုံးပါ)
♦ ချင်း – 45 gm (ပါးပါးလှီးထားပါ)
♦ ခရမ်းချဉ်သီး – ၃ လုံး (လေးခြမ်းခြမ်းပါ)
♦ မရမ်းသီးဆားရေစိမ် – ၃ လုံး
♦ ရေ – ၁.၈ လီတာ
♦ ကြက်သွန်ဖြူဆီချက် – အနည်းငယ်
ဟင်းချိုချက်မဲ့အိုးထဲကို ရေထည့်ပြီး ဆူအောင်တည်ပါ။ ပြီးရင် ဝက်သား၊ ချင်း၊ ကြံမဆိုင် (Salted Mustard Green)၊ မရမ်းသီး ဆားရေစိမ် (Salted Plum)၊ ပဲပြားထည့်ပြီး ဝက်သားနူးအောင်တည် ထားပါ။ ပြီးရင် ပဲပြား၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်၊ ဆား၊ ကြက်သားမှုန့်ထည့်ပြီး ဆက်တည်ထားပါ။ ဒီဟင်းချိုချက်တဲ့အခါ ကြာမြင့်တဲ့အချိန်ကတော့ ၃၅ မိနစ်ခန့်ပါ။ စားသုံးမည်ဆိုပါက တစ်ယောက်စာအတွက် ပန်းကန်လုံးသီးသန့်စီမှာထည့်ပါ။ ပြီးရင် ကြက်သွန်ဖြူကြော်ထည့်ပြီး သုံးဆောင်ပါခင်ဗျာ။
ညနေစာ အိမ်လုပ် မြီးရှည်လေးပါ
May 1, 2016 dpakyaw	Leaveacomment
နန်းကြီးဖတ်နဲ့ကြက်သားပြု တ်ထားတာရှိနေလို့ အလွယ်တစ်ကူ လုပ်စားဖြစ်သွားတယ်
ကော်မှုံ့ကို ဆား ဟင်းခတ်မှုံ့ ရေထည့်ဖျော်ပြီး မီးအေးအေးနဲ့ကျိူ လိုက်တယ်
ကြက်သွန်ဖြူ နဲ့ဂျင်းအနဲငယ်ထောင်း ရေဖျော်
အရောင်ဆီလုပ်ဖို့ ပန်းကန်လုံးတစ်ခုထဲ အရောင်တင်မှုံ့ထည့်
ဆီအပူပေးပြီး ဆီပူလာရင် မီးပိတ်လိုက်ပါတယ်
ပြီးမှ ပန်းကန်ထဲလောင်းချလိုက်တော့ အရောင်ဆီပေါ့နော်
ငရုတ်သီးဆီကြော်ကတော့ ရှိပြီးသားမို့ လုပ်စရာမလိုတော့ဘူး
စားမယ့်ပန်းကန်ထဲမှာ တစ်ယောက်စာ မြီးရှည်ဖတ်ထည့်
ပဲပင်ပေါက် ကြက်သားမျှင် အရောင်ဆီ ကော်ရည်
ပဲငါးပိ(အစပ် ပဲငါးပိအမည်းက ခုနောက်ပိုင်း ဝယ်လို့မရလို့ပါ)
ပါးပါးလှီး ကြက်သွန်မြိတ် တရုတ်နံနံနဲနဲ မုန်ညင်းချဉ်ထည့်နယ်ရုံပါ
ကြက်ပြု တ်ရည်ကို ပူအောင်ပြန်တည်ပြီး
(ဟင်းခတ်မှုံ့က စားရင်ထည့်ပါ မစားရင် မထည့်ပါနဲ့နော်)
ငါးဖယ်လုံးတွေ ဘာတွေတော့ မထည့်တော့ပါဘူးရှင်